Mari-nehupfumi, 30 Zvita 2016
Chishanu 30 Zvita 2016
Fidelity Printers And Refiners Yopererwa neMari yeKutenga Goridhe
Dambudziko rekushaikwa kwemari munyika rave kuita kuti kambani yeFidelity Printers and Refiners, itadzewo kuwana mari yekutenga goridhe kunyanya kubva kune vemakambani madiki anochera chicherwa chakakosha ichi.
VaTsvangirai Vanoti Hurumende Ikasachinja Maitiro Nyika Icharamba Iri kuMawere
Vaimbova mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDCT, VaMorgan Tsvangirai, vanoti hurumende inofanira kuvandudza nyaya dzekurima pamwe nekuvhura maindasitiri kuitira kuti hupfumi hwenyika husimukire.
Vagari vekwaChiyadzwa Vononga Svosve neMuromo Kunyangwe Vaine Minda yeMangoda Pedyo
Vagari vekwaChiadzwa vari kuchema-chema nekushanduka kwaita hupenyu hwavo izvo zvopa kuti tsika yehupfambi nemamwe mabasa erima zvitekeshere munharaunda iyi.
Varimi Vokurudzirwa Kushandisa Nemazvo Rubatsiro rweCommand Agriculture
Zvita 29, 2016
Makonye e"Armyworm" Odya Chibage kuMashonaland West
Varimi vechibage munzvimbo yeMakonde mudunhu reMashonaland West vanoti goho ravo richakanganiswa zvakanyanya nekuda kwemakonye emhando ye"armyworm" ari kudya zvirimwa zvavo.
Zvita 28, 2016
Gavhuna weRBZ Oparura Hurongwa Hwemafambisirwo eMari Muna Ndira 2017
Gavhuna webhanga guru renyika Dr John Mangudya vari kutarisirwa kuparura hurongwa hwemafambisirwo emari kana kuti Monetary Policy mukupera kwaNdira gore rinouya.
Vanoita Zvekubheja Bhora neMabhiza Vopererwa neMari kuChinhoyi
Vatambi venjuga yebhora, mabhiza neimbwa havasi kufara nekutadza kubhadharwa mari dzavanenge vahwina muChinhoyi.
Vanhu Vogunun'una neKushaya Mari muMabhanga
Dambudziko rekushaikwa kwemari riri kuenderera mberi uye mabhanga ese nhasi ange aine mitsetse yakareba yevanhu vange vachida mari uye vazhinji vataura neStudio 7 vanoti vave kubatwa neseri kweruoko nemabhanga.
Britain Yobatsira Zimbabwe neMari yeKurwisana neDambudziko reKushaya Chikafu Chinovaka Miviri yeVana
MuZimbabwe chete vana vanodarika zviuru makumi matatu vanonzi vakatarisana nedambudziko rekushaiwa zvekudya zvinovaka muviri.
Zvita 27, 2016
Kanzuru yeHarare Yoshandisa Vanoronda Zvikwereti Kuti Iwane Mari Dzayo Dziri muVanhu neMakambani
VaChideme vanoti kanzuru inoda mari iri muvagari iyi zvakanyanya kuitira kuti ikwanisewo kufambisa mabasa ayo akafanana nekutakura marara nezvimwe.
Zvita 26, 2016
Hurumende Yoparura Zvidzidzo Zvitsva zvePolitical Economy neEconomic History muZvikoro
PTUZ inoti hurumende haina zvayakazivisa pamusoro pevarairidzi vachadzidzisa zvidzidzo zvitsva izvi, zvichireva kuti varairidzi vari kudzidzisa History pari zvino ndivo vanenge votakuriswa mutoro uyu.
Zvita 23, 2016
Kushaya Mari Kwopa Kuti Vakawanda Vasaende kuKisimusi kuMusha
Dambudziko rekusamira zvakanaka kwehupfumi pamwe nekushaikwa kwemari mumabhanga raita kuti vamwe vanhu vemuZimbabwe vatadze kufamba kuenda kumisha yavo yekumaruwa pamwe nemamwe madhorobha.